दुई दुईवटा वाइड बडी विमान किनेर राज्यका निकायहरुले ब्रह्मलुट गरेको खबर नसुनेको होइन । अब निजगढको विमानस्थल बनाउने नाममा ब्रह्मलुट गर्न लागेको खबर सुन्न पाउनु कुन नौलो कुरा रह्यो र ! जे जे गर्नुछ गर्नुहोला, तर विमानस्थलमा कालोपत्रे चाँडै उप्किएको या कमसल सामानको प्रयोगले विमानस्थल भत्केको खबर चाहिँ चाँडै सुन्न नपरे...
तीन वर्षभित्र काठमाडौंमा मोनोरेल निर्माण हुने रे, कतिपय जिल्लामा गोरेटो बाटोसम्म राम्रो छैन । कच्चि सडकसम्म पुगेको छैन । ६ महिना गाडी र ६ महिना पैदल हिँडेर जानुपर्छ । कतिपय ठाउँमा कोही बिरामी र सुत्केरी भएमा बोकेर अस्पताल लानु पर्छ । कहिलेकाहीँ बाटैमा मान्छेको ज्यान जान्छ । त्यस्ता विकट जिल्लामा कम्तिमा गाडी जानेसम्...
यो बर्षको तिज पनि अस्वस्थ दर, असमान पहिरन र हुनेखाने अनि हँुदा खाने बीचको फरकपनबाट अछुतो रहन सकेन । जे होस आउँदा तिजहरुले नेपालीपन र संस्कृति अगाल्ने अपेक्षाका साथ यस बर्षको तिजलाई विदा गरियो । सबै दिदीबहिनिलाई धेरै धेरै शुभकामना !
मेडिकल सिटीको रुपमा चिनिने चितवनको भरतपुरमा सर्पले टोकेका ३ बर्षिया बालकलाई उपचार गर्न समयमै अस्पताल पु¥याउदा पनि अस्पतालले अनेक बहाना गरेर भर्ना लिन नमान्दा ज्यान गयो । कतै नयाँ मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन कै असर त हैन ? चिकित्सकले जोखिम मोल्दै जिम्मेवारी बहन गर्न डराएका त हैनन् ? वा स्वास्थ्य संस्थाको लापरबाही र ग...
गर्दा असम्भव केही रहेनछ भनेर विमस्टेकका बेला सिंगारिएको काठमाडौं देखेर पनि प्रमाणित हुन्छ । काठमाडौंलाई जस्तै पुरै देशलाई नै सजाएर राख्न सकिन्छ । पाहुनालाई देखाएपछि सिंगार पुछ्ने हैन देश सजाउने तर्फ सरकारले ध्यान दिन पर्छ ।
पदक दिने व्यक्ति वा संस्था अनि दिइने व्यक्तिमा भर पर्ने कुरा हो । पूर्व प्रधान न्यायाधीश गोपाल प्रसाद पराजुलीले यो पदक पाउनु पक्कै पनि न्यायसङ्गत भएन । उहाँको मात्रै कुरा हैन पदक र सम्मान पाउने मापदण्ड के हो भन्ने कुरा नै थाहा हुन्न । पदक र सम्मान पाउनुपर्ने व्यक्तिले पाएका हुँदैनन् । अनि पाउनेले के कारणले पाए भन्ने थाह...
सामान्य कैदिबन्दिको परिवारमा जन्मिए पनि, सामान्य जातको भएपनि, बाल्यकालमा औपचारिक शिक्षा हासिल गर्न नपाए पनि, गाइ गोठालाहरुको सङ्गत भएपनि, आफ्नो नजिकको आफन्त नै शत्रु भएपनि, सत्ताको बागडोल कहिल्यै आफ्नो हातमा नभए पनि, यदि आफुसँग क्षमता छ भने संसारले पुजा गर्छन् भन्ने कुराको उदाहरण बन्न सक्नु नै भगवान कृष्णको मन पर्ने प...
भ्रष्टाचारको सुचिमा नेपाल निकै अगाडि छ । तर भ्रष्टाचार गरेर कारवाहीमा परेकाहरुको संख्या कम छ, किन होला ? भस्ट्राचार गर्नेलाई कारवाही नगर्ने ,अनि हाम्रा नेताहरुले देशको विकास गछौं भनेर मात्र हुन्छ त ?
झन्डै एक महिनाको अन्तरालमा ६÷७ वटा बलात्कारका समाचार आए, एका पट्टि फासीको माग गर्दै महिला अधिकारकर्मी लागेको छन्, भने अर्को तिर झन् बलात्कारका घटना बढीरहेको छन् । यसको समाधानको उपाय खोज्न सरकारले छिटो भन्दा छिटो ध्यान दिन आवश्यक छ । अनि सर्वसाधारणले पनि आफू कहाँ कुन अवस्थामा छु भनेर पहिला नै सोच्नु पर्याे ।
संविधानका ठेलिहरुमा निदोषलाई न्याय र दोषीलाई सजायको ब्यवस्था यसरी गरिएको हुन्छ कि मानौ न्याय प्रदान गर्न सरकार घर घरमै आइपुग्छ । तर यथार्थ भने निकै फरक छ, यहाँ बलात्कारी पत्ता लगाएर सजाय दे भन्नका लागि सन्नी खुनाहरु सहिद हुनुपर्छ । यदि ससारको उत्कृष्ट शासन ब्यवस्था हुँदा पनि सानालाइ ऐन र ठुलालाई चैन भन्ने उखाननै चर...
सार्क भारत कै कारण ओझेलमा परेको छ ,पाकिस्तान संगको चिसो सम्बन्धका कारण भारत आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न बिमस्टेकलाई आफ्नो पुच्छर बनाउन खोज्दैछ र पाकिस्तानलाई एक्ल्याउने भारतिय रणनीति करिब सफल भएको छ । बिमस्टेकमा पनि यस्तो रणनीति भारतले न खेल्ला भन्न सकिन्न । अहिले नेपाल दुबै संगठनको अध्यक्ष राष्ट्र भएकोले सन्तुलित सम्बन्ध दुबै...
नेपालमा अरु देशका सेना आउनु भनेको नेपाली सेनालाई कमजोर ठान्नु हो । कस्मिर बचाउने नेपाली सुरक्षाकर्मीले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा दिन किन सक्दैनन्?
कञ्चनपुरकी १३ बर्षिय निर्मला पन्तको वलात्कारपछि हत्या भएको घटना सेलाउन नपाउदै पोखरामा १३ बर्षिय पुष्पा केसीको शव भेटिएको छ । जबसम्म फाँसी को सजाय हुदैन तबसम्म यस्ता घटना रोकिदैनन् ।
नेपालमा बलात्कार र हत्याको शृङ्खखला जस्तो देखिन्छ, सरकार अझै अपराधि बचाउन लागेको आभास हुन्छ । कंचनपुरको घटनाबाट मैले भोट हालेर जिताएका सांसद र मन्त्रीलाई संविधानमा भ्रष्टाचार र बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड या अरु समान कार्बाहीको कानुन बनाएर अहिलै लागु गर्ने सुझाब दिने हैसियत छ कि छैन ? छ भने किन सुनुवाई हुदैन ?
जुन सरकार आए पनि देशमा हत्या हिंसा बलात्कार रोकिएको छैन । नेपालमा कानुन छ भनेर कसैले पनि महशुस गर्न नपाउने भए ।